ကုန်သည်စက်မှုအသင်းချုပ် TVET (Technical Vocational Educational Training Unit) နှင့် Schneider Electric Oversea Asia Pte. Ltd Myanmar Branch (SEOAMM) တို့ပူးပေါင်း၍ MOU ရေးထိုးပွဲကျင်းပ | UMFCCI
ကုန်သည်စက်မှုအသင်းချုပ် TVET (Technical Vocational Educational Training Unit) နှင့် Schneider Electric Oversea Asia Pte. Ltd Myanmar Branch (SEOAMM) တို့ပူးပေါင်း၍ MOU ရေးထိုးပွဲကျင်းပ
Written by UMFCCI Administrator // December 23, 2014 // MOUs, UMFCCI News // No comments
ရန်ကုန် ဒီဇင်ဘာ ၁၇၊၂၀၁၄
ပြည်ထောင်စု သမ္မတမြန်မာနိုင်ငံ ကုန်သည်များနှင့် စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များ အသင်းချုပ် TVET (Technical Vocational Educational Training Unit) နှင့် Schneider Electric Oversea Asia Pte. Ltd Myanmar Branch (SEOAMM) တို့ပူးပေါင်း၍ စက်မှုသက်မွေးဆိုင်ရာ သင်တန်းများ ဖွင့်လှစ်နိုင်ရန်အတွက် နားလည်မှုစာချွန်လွှာ လက်မှတ်ရေးထိုးပွဲ အခမ်းအနားကို ၂၀၁၄ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၁၇ရက် နံနက် ၁၀နာရီတွင် ကုန်သည်စက်မှုအသင်းချုပ် စတုတ္ထထပ်တွင် ကျင်းပခဲ့ပါသည်။
အခမ်းအနား၌ ကုန်သည်စက်မှုအသင်းချုပ် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဝင်းအောင်၊ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ် ဦးမိုးမြင့်ကျော်၊ TVET (Technical Vocational Educational Training Unit) ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ ကုန်သည်စက်မှုအသင်းချုပ် ဗပိာုအလုပ်အမှုဆောင် ဦးမြင့်ဇော်၊ Myanmar Chamber Vocational Institute ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဇော်မင်းဦး၊ Schneider Electric Oversea Asia Pte. Ltd Myanmar Branch (SEOAMM) ၏ Country President Mr. Pascal Reigner နှင့်တာဝန်ရှိသူများ၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များ တက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။
အဆိုပါ အခမ်းအနားတွင် ကုန်သည်စက်မှုအသင်းချုပ် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဝင်းအောင်၊ အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူးချုပ် ဦးမိုးမြင့်ကျော်၊ TVET (Technical Vocational Educational Training Unit) ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ ကုန်သည်စက်မှုအသင်းချုပ် ဗပိာုအလုပ်အမှုဆောင် ဦးမြင့်ဇော်၊ Myanmar Chamber Vocational Institute ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဇော်မင်းဦး၊ Schneider Electric Oversea Asia Pte. Ltd Myanmar Branch (SEOAMM) ၏ Country President Mr. Pascal Reigner တို့က အဖွင့်အမှာစကား အသီးသီး ပြောကြားခဲ့ကြပါသည်။
ဆက်လက်၍ Myanmar Chamber Vocational Institute ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဇော်မင်းဦးနှင့် Schneider Electric Oversea Asia Pte. Ltd Myanmar Branch (SEOAMM) ၏ Country President Mr. Pascal Reigner တို့က ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးနှင့် အကျိုးထိရောက်မှု စံချိန်စံနှုန်းများ ကျွမ်းကျင်သည့် အရည်အသွေး ပြည့်မီသော လျှပ်စစ် အတတ်ပညာရှင်များ မွေးထုတ်ရန် နားလည်မှုစာချွန်လွှာ လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြပါသည်။ ထို့နောက်အမှတ်တရဓာတ်ပုံများ ရိုက်ကူး၍ အခမ်းအနားကို မွန်းလွဲ ၁၂နာရီတွင် ရုတ်သိမ်းခဲ့ပါသည်။
ကုန်သည်စက်မှုအသင်းချုပ် TVET (Technical Vocational Educational Training Unit) သည် နေစွမ်းအင်ဆိုင်ရာ၊ လျှပ်စစ်စွမ်းအင်ဆိုင်ရာ၊ ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ သင်တန်းများကို ကုန်သည်စက်မှုအသင်းချုပ်၌ ဖွင့်လှစ် သင်ကြားပေးလျက်ရှိပါသည်။
Schneider Electric Oversea Asia Pte. Ltd Myanmar Branch (SEOAMM) သည် ပြင်သစ်နိုင်ငံ အခြေစိုက် ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပြီး ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ ၎င်းရုံးဆိုက်ရာ နိုင်ငံအများအပြားတွင် Corporate Social Responsibility လှုပ်ရှားမှုများကို ဆောင်ရွက်နေသော ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။